Zvimwe Linux - Linux Vapomeri | Linux Vakapindwa muropa (Peji 2)
postmarketOS v21.06 Service Pack 4 inosvitsa Phosh 0.14.0 uye kuvandudzwa kweapp
postmarketOS v21.06 Service Pack 4 yasvika nezvinhu zvitsva mumapurogiramu, asi chinonyanya kukosha ndechekuti inosanganisirawo Phosh 0.14.0.
PineTab muna Gumiguru 2021: Arch Linux ine Plasma, vhiki nevhiki Manjaro mifananidzo uye Focal Fossa yakamirira Ubuntu Kubata
Rimwe gore mushure mekuvambwa kwePineTab, zvinhu zvave nani zvishoma. Zvinhu zvakamira sei nhasi? Isu tichakuudza.
postmarketOS v21.06 Service Pack 3 inounza dingindira rayo kuGTK3 uye GTK4, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
postmarketOS v21.06 Service Pack 3 yauya nekuvandudzwa senge izvozvi dingindira rayo rinogona kushandiswa muGTK3 uye GTK4 kana Tweaks 0.8.1.
Manjaro 2021-08-09 yakanyanya kukosha kune vashandisi ve KDE, inosvika nePlasma 5.22.4 uye PulseAudio 15.0
Nyowani yakagadzikana vhezheni uye zvakare vashandisi veKDE vanoenda zvirinani. Manjaro 2021-08-09 inosvika nePlasma 5.22.4 uye PulseAudio 15.0.
Kana iwe uchida kuisa anoshanda sisitimu mune yemukati ndangariro yezvimwe zvishandiso, iwe uchazoda JumpDrive, mhando yekudarika.
Iyo vhezheni yeArch Linux ine Plasma uye KDE software inowanikwa yePineTab, yakavhurika sosi piritsi rePINE64
Zvino zvichave nyore kuisa WSL paWindows: rairo imwe chete
Microsoft yakazivisa kuti yakapusa nzira yekumisikidza yeWSL yave kuwanikwa. Iye zvino chingoshandisa rairo muPowerShell.
Plasma Mobile 21.07 inosvika iine zvirinani kuita, kugadzirisa muepodcasts app uye kumwe kugadzirisa
Plasma Mobile 21.07 yauya pamwe nekuvandudzwa kwakawanda kubva kuShell iri kuita zvirinani kusvika kune yakanyanya dhiragi Dial.
Iyo JingPad A1 inoratidza muvhidhiyo maitiro aunogona kumhanyisa maapplication eApple
Vhidhiyo yakaburitswa ichiratidza kuti iyo JingPad A1 inokwanisa sei kumhanyisa Android application. Izvi zvinoruramisa mutengo wayo here?
Iyo JingPad A1 inowanikwa mune yekutanga vhidhiyo vhidhiyo, uye zvinoita sekunge ichave yakakodzera iyo mari
Vakaburitsa yekutanga vhidhiyo yepamutemo yeJingPad A1, piritsi rinogona kunyatso shandura zvese pamahwendefa nemaLinux masystem.
Android 12 inouya neyakanyanya kugadzirisazve kubvira Chigadzirwa Dhizaini
Google yakaunza Android 12, yekutanga beta yeshanduro yeayo inoshanda system inouya neshanduko huru kubvira Android 5.
Warpinator inowanikwa yeApple, uye inoshanda zvirinani pane zvaunotarisira
Warpinator yakarova Google Play mune isiriyo vhezheni, asi zvakakosha kune iyo faira kugovana pakati peLinux zvishandiso.
JingOS inoramba ichiita zvirinani uye inogona kuve yakanyanya kunaka sarudzo kune vashandisi vePineTab
JingOS yakagadzirira kuyedzwa, uye iyo Plasma-based desktop inokwezva kwazvo. Pasina kupokana, sisitimu inoshanda yekufunga.
Linux uye yakavhurika-sosi: chaiyo kududzwa kwe…
Zvirokwazvo dzimwe nguva wanga uchinge uri mudambudziko nekuti wanga usingazive chaizvo kuti ndeapi mataurirwo chaiwo emamwe mazwi
Kuseka bhutsu mbiri ne p-bhuti, chifananidzo chinokutendera kumhanya 13 distros! pane yako PinePhone
PINE64's PinePhone inogona kumhanya dzakasiyana dzakasiyana, asi iwe waizviziva here kuti pane mufananidzo une 13 pachayo?
Iyo PineTab inogona kumhanyisa mamwe mashandiro ekushandisa kubva kune SD kadhi. Mobian neArch Linux vanga vari vekutanga.
Android 11, ikozvino inowanika yega yemunhu, yakavanzika uye iri nyore-kudzora vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu
Google yatanga Android 11, iyo inovimbisa kuve iyo vhezheni inotibatanidza kwazvo nevanhu vatinoda nedzimwe nhau.
Pinebook Pro, iyo laptop yeLinux isingasviki $ 200
Aya ndiwo marondedzero ePinebook Pro, yakachipa laptop ine Linux
Chrome OS inozokwanisa kumhanyisa Windows zvishandiso, kunyangwe kuburikidza nekuona
Kutenda kune chibvumirano pakati peGoogle neZvakafanana, Chrome OS inozokwanisa kumhanyisa Windows zvinoshandiswa munguva pfupi iri kutevera.
Lampone Pi, Live-chete Raspbian kudzivisa matambudziko anogona kuchinjirwa neshanduko pane yedu Raspberry Pi
Lampone Pi ishanduro yeRaspbian iyo yatinogona kungomhanya muLive mode, iyo inovimbisa kuti hapana shanduko inokonzeresa matambudziko eiyo system.
Chrome OS 83 inosvika ichibvumidza kutumidza madhizaikopu chaiwo uye dzimwe nhau dzakakosha
Chrome OS 83 yasvika mushure mekusvetuka vhezheni ye82 nekwanisi yekuisa mapoka tabo mumapoka uye nedzimwe nhau dzakakosha.
PineLoader yakaonekwa pavhidhiyo ichiratidza kuti akawanda maseru eLinux anoshanda masisitimu anogona kumhanyisa pane imwecheteyo terminal.
Chrome OS 81 yakauya pamwe nekuvandudzwa kwetafura modhi uye idzi dzimwe nhau
Chrome OS 81 yasvika mukutanga kwaMay 2020 nekuvandudzwa kwetablet mode, maekisesaizi nedzimwe nhau dzinokosha.
Iwe unoda kugadzira Linux zvinoshandiswa? Iri peji rinogona kukubatsira
Iwe unoda kugadzira Linux zvinoshandiswa? Pane ino peji iwe unowana runyorwa rwemahara zviwanikwa kuti udzidze maitiro kuzviita.
Mwedzi mina naFocal Fossa. Ichi ndicho chiitiko changu kushandisa Ubuntu 4
Mwedzi mina naFocal Fossa. Ichi ndicho chiitiko changu pachedu ndichishandisa Ubuntu 4 kubva pamatanho ekutanga ekuvandudzwa kwayo mukupera kwegore rapfuura.
Android-x86 9.0-r2 ikozvino yavapo, iine kernel yakagadziridzwa uye UEFI boot mhinduro
Android-x86 9.0-r2 yave kuwanikwa, yechipiri yekuvandudza mune dzino dzakateedzana dzinouya nekernel nyowani seyakakurumbira.
LibreELEC 9.2.1 inosvika nerutsigiro rweWiredGuard uye yakavakirwa paKare 18.6
LibreELEC 9.2.1 yauya nezvakawanda zvirinani kune Raspberry Pi 4 bhodhi uye yakavakirwa paKare 18.6, yazvino vhezheni yeakakurumbira midhiya mutambi.
Chrome OS 80 inovandudza kuisirwa maAPK uye inoita iyo PiP paNetflix
Google yakaburitsa Chrome OS 80 nenhau dzinonakidza senge iyo yayo Linux Containers yave kubva paDebian 10 "Buster".
Android-x86 9.0-r1 inouya nerutsigiro rwemazhinji-ekubata mapaneru uye izvi zvimwe zvekuvandudza
Iye zvino inowanikwa vhezheni yeAroid yemakomputa akavakirwa paPie: Android-x86 9.0-r1 inouya nenhau dzakasarudzika dzatinotsanangudza pano.
Azure Sphere, Microsoft inoshanda sisitimu yeIoT iyo yakavakirwa paLinux yave kuwanikwa
Microsoft yakaburitsa Azure Sphere, kambani inoshanda sisitimu yeInternet yezvinhu (IoT) iyo yakavakirwa paLinux.
postmarketOS, Linux-based mobile operating system, inogona kutsigira maapplication eApple nekuda kweAnbox
Vagadziri vePostmarketOS vari kushanda kuti vagadzire yavo sisitimu yekushandisa inotsigira Android maapplication nekutenda kuna Anbox
AndEX 10 yatobvumidza iwe kumhanya Android 10 paPC yako
Arne Exton yakaburitsa AndEX 10, yazvino vhezheni yeayo Android-yakavakirwa mashandiro sisitimu izvo zvino zvavakirwa Android 10.
Maitiro ekushandura yako Raspberry Pi kuita Android TV. Asi zvakakosha here?
Muchikamu chino tichakuratidza maitiro ekushandura yako Raspberry Pi kuita Android TV uye isu tinokuudza iwe mune zviitiko zvipi zvingave zvakakodzera.
Google yakaburitsa Chrome OS 79, nyowani nyowani kune yayo desktop desktop inoshanda iyo inouya nekumwe kudiki kugadzirisa.
Proteus Mudziyo ikombuta inochengetwa, saizi yefoni mbozha, asi nemabasa edesktop uye kusavapo kwenhare.
LibreELEC 9.2.0 yakaburitswa zviri pamutemo kuti ishandure Raspberry yako Pi ive media media zvichibva pane yazvino vhezheni yeKare.
PinePhone, iyo Plasma foni inokwanisa kumhanya desktop desktop
Vhidhiyo yakaonekwa matinoona iyo PinePhone yePine64 inomhanya desktop desktop. Izvi zvinoshandura here mitemo yemutambo?
Volla Runhare chirongwa cheiyo Android foni inoenderana neUbuntu Runhare
Volla Runhare chirongwa chitsva chinovimbisa kuvhura foni inoenderana neUbuntu Runhare neApple zvinoshandiswa pamutengo wakadzikira.
Iyo yazvino vhezheni yeChannel OS yatove kutsigira chaiwo madhesiki
Google yakatanga chirongwa chitsva cheChrome OS uye chimwe chezvinhu zvadzo zvitsva ndechekuti inotsigira chaiwo nzvimbo.
Pakutanga kwegore, Samsung yakaburitsa Linux paDeX. Zvino, risingasviki gore gare gare, chirongwa ichi chakamiswa. Isu tichakuudza.
Google yakaratidza iyo Pixelbook Go, komputa yayo inodhura iyo ichave kana isingazove ichienderana nemaonero eumwe neumwe (kwandiri, hausi).
AsteroidOS, iyo nyowani yekushandisa sisitimu yewachi yakavakirwa paLinux kernel, inosvika vhezheni 1.0
AsteroidOS itsva smartwatch inoshanda sisitimu iyo yakavakirwa paLinux kernel. Yasvika vhezheni 1.0.
Maitiro ekubatanidza kune yakavanzwa Wi-Fi network kubva kune yedu Raspberry Pi
Muchikamu chino tinokuratidza maitiro aungaita kubatanidza kune yakavanzwa netiweki yeWi-Fi kubva kune yako Raspberry Pi neRaspbian inoshanda sisitimu.
Scrot, maitiro ekugadzira skrini muRasbpian isina ImpPt kiyi
Muchikamu chino tinotsanangura maitiro ekutora skrini pane yako Raspberry Pi neRaspbian nekutenda kune iyo scrot chishandiso.
Raspbian 2019-09-26 inosvika kunatsiridza rutsigiro rweRasperry Pi 4
Raspberry Pi yakaburitsa Raspbian 2019-09-26, vhezheni yayo Debian-yakavakirwa mashandiro sisitimu iyo inovimbisa kuvandudza rutsigiro neiyo Raspberry Pi 4.
Autonomous Linux, yekutanga nyika inozvimiririra inoshanda sisitimu yakafumurwa naOracle
Oracle yakaratidza Autonomous Linux, yekutanga nyika inozvimiririra inoshanda sisitimu iyo, zvingave sei neimwe nzira, yakavakirwa paLinux.
PineTime inotaura kuti ndiyo yakachipa inopfeka smartwatch pamusika. Ichaitwa nePINE64 uye ichashanda seshamwari yefoni yeLinux.
Android 10 inosvika iine rima nyowani modhi uye smart mhinduro
Google yakaparura Android 10, yazvino vhezheni yayo nharembozha inoshanda sisitimu yakazara nezvinhu zvitsva, senge inozivikanwa nzira yakasviba.
Android 10, yekutanga vhezheni yeApple kusiya masweets
Google yakazivisa kuti inotevera vhezheni yayo mbozha yekushandisa system ichadaidzwa kuti Android 10 chete, kudonhedza iro rinowanzo gadzikana zita.
CutePi, iyo yakavhurwa sosi, Linux-based Raspberry Pi piritsi
Raspberry Pi iri kushanda pahwendefa. Ichadaidzwa kunzi CutePi, ichave yakavakirwa paLinux uye inotaridzika zvakanaka kwazvo panguva ino.
Chrome OS 76 inosvika iine itsva multimedia kutonga uye ichivharira Flash
Google yatanga Chrome OS 76, yazvino vhezheni yedesktop yayo inoshanda sisitimu iyo inouya nezvinhu zvitsva senge nyowani multimedia zvinodzora.
HarmonyOS, Huawei inoshanda sisitimu yakavakirwa paLinux kutarisa kune ramangwana
Hutachiona hweHuawei hunodaidzwa kuti HarmonyOS uye huchave hunowanikwa pane zvinofamba, mapiritsi, mota nemhando dzese dzemidziyo yakanaka.
Google yakaburitsa iyo Nyamavhuvhu kuchengetedzwa kwekuvandudza kweApple P, zvigamba zvinogadzirisa huwandu hwe26 bugs
Librem 5, yakachengeteka Linux-yakavakirwa foni, ichaenda inotengeswa neaya maratidziro
Kuchena kwakasimbisa iyo technical technical yeiyo Librem 5, yayo chengetedzo-yakatarisana neLinux-yakavakirwa foni. Tsvaga zvese zviri muchinyorwa chino.
WSL 2 yeva mukati ikozvino inotsigira kernel pane inoda
Microsoft yakaburitsa vhezheni itsva yeWSL 2 iyo ikozvino inotibvumidza isu kusarudza kernel yatiri kuda kuti yedu chaiyo muchina ishandiswe.
Inogumbura Security inotangisa Kali NetHunter App Chitoro, chengetedzo app chitoro cheApple
Muchiitiko chekuti pakanga pasina zvakakwana zvitoro zveAntroid, Anogumbura Security atangisa Kali NetHunter App Chitoro nemapurogiramu akachengeteka.
Google yakaburitsa iyo June June P yekuchengetedza yekuvandudza.Iri pano kugadzirisa kutadza zvikanganiso pamwe nezvimwe zviputi paPixels.
Chrome OS 75 iri pano ine nyowani yevabereki yekudzora uye nekuvandudza kusangana kweLinux maapp
Google yatanga Chrome OS 75, iyo nyowani vhezheni yedesktop inoshanda sisitimu iyo inouya nenhau dzinonakidza dzinoenderana neLinux maapp.
June 2019 Android Chengetedzo Patch Zvino Inowanikwa
Google yakaburitsa June 2019 chengetedzo chigamba cheApple kugadzirisa huwandu hwese makumi maviri nembiri dzinozoita kuti ive yakachengeteka.
BlackArch Linux 2019.06.1 Iye zvino Inowanikwa ne150 + Zvishandiso Zvitsva
BlackArch Linux 2019.06.1 yabuda izvozvi uye inosanganisira anopfuura zana nemakumi mashanu maturusi kune ino "tsika yekuba" kugovera.
Antergos Linux Project inozivisa kufa kweAntergos
Nhau dzakaipa: iyo Arch Linux Antergos-yakavakirwa sisitimu yekushandisa ichamiswa mushure memakore manomwe ichiwana kuyemurwa kwevashandisi.
Huawei anotarisana nedambudziko kana ichida kuenderera ichishandisa Android pamidziyo yayo
Huawei haizove nyore kana iwe uchida kuenderera mberi uchishandisa Android pane ako zvishandiso, nekuti Google ichakwanisa kukutadzisa uye hauzokwanise kushandisa masevhisi avo.
Android Q Beta 3 inosvika ine yakasviba modhi yesisitimu yese
Google yakaparura Android Q Beta 3, imwe bvunzo vhezheni ine yakanyanya kuzivikanwa ruzivo ndeye yakasviba modhi yekuchengetedza bhatiri pane OLED skrini.
Google yakaburitsa chita chekuchengetedza Chivabvu chaMay 2019 cheiyo Android P, inogadziridza inosanganisira 30 ekugadzirisa.
RaspAnd Pie, Android 9 Pie yeRaspberry Pi 3 inoramba ichiita zvirinani uye ikozvino ine Yalp Chitoro app chitoro uye iyo Evie yekutanga.
Remmina inokutendera iwe kuyedza anopfuura mazana maviri eLinux masisitimu kuburikidza neiyo kure desktop
Mune ino dzidziso tinotsanangura maitiro ekuyedza anopfuura mazana maviri masisitimu anoshanda neRemmina uye pasina kuisa kana kurodha chero chimwe chinhu.
Raspbian 2019-04-8 ikozvino yavapo: optimizations uye akagadziridzwa maapplication
Raspberry Pi yakaburitsa Raspbian 2019-04-08, iyo nyowani vhezheni yayo Debian-yakavakirwa mashandiro sisitimu yeimwe yemabhodhi ane mukurumbira pasi.
Kuchenesa kunosimbisa kuchengetedzwa kwemafoni ayo kuburikidza neVPN
Purism, iyo kambani inovhura yakachengeteka Linux-yakavakirwa mafoni, ichaita ayo matematari akachengeteka zvakanyanya nekutenda nekushandiswa kweyakavanzika VPN.
Bubbles: nyowani multitasking inowanikwa mu Android Q Beta 2
Google yatanga beta yechipiri yeApple Q uye pakati pezvinhu zvakajairika zvine hunyanzvi isu tine nyowani nyowani mukuita kwakawanda.
AndEX Pie 9.0 yave kuwanikwa, chirongwa chitsva icho chatinogona kuisa nacho Android uye kuitisa pane chero chero PC.
Linux ndimambo kana zvasvika kune Smart TV. Uye ichaenderera mberi
Ndiani anotonga musika we Smart TV? Ehe, Linux. Zvinoita sei? Muchikamu chino tinotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive.
Ubuntu MATE 18.04 Beta 1 yeRaspberry Pi inosvika neUbuntu kernel
Martin Wimpress yakaburitsa yekutanga beta yeUbuntu MATE 18.04 yeRaspberry Pi ine hukuru hwekuvandudza kune kernel nezvimwe zvinhu.
Chrome OS 73 yave kuwanikwa uye inouya nenhau dzinonakidza, senge kugona kugovera mafaera neLinux application.
Android Q inopinda beta chikamu, ichave yakachengeteka kupfuura nakare kose
Iyo inotevera vhezheni yeGoogle's mobile operating system, Android Q yapinda beta uye ichave yakachengeteka zvakanyanya vhezheni.
Samsung Galaxy Fold: chikara chinopetwa chine moyo weLinux
Samsung Galaxy Fold izita idzva reiyo yega smartphone yefoni. Mhuka yehardware, ine moyo weLinux uye mutengo wehukuru XXL
David Mayoral, Forbes uye Alias ​​Robotic: matatu masangano uye imwe chete nzvimbo ...
David Mayoral, mubatanidzwa weErle Robotic uye parizvino CEO weAlias ​​Robotic adzoka munhau nekupinda muForbes 30 Under 30 2019 runyorwa
Windows 10 inokutendera iwe kuwana ako maLinux mafaera kubva kune anotsvaga
Inouya Windows 10 gadziriso inokutendera iwe kuvhura maLinux mafaera kubva kuExplorer uye nyore nyore kuishandisa
Iyo nyowani vhezheni yeDell XPS 13 Yekuvandudza Dhizaini inosvika neUbuntu
Isu tinokuudza iwe zvese zvese zveiyo nyowani vhezheni yeiyo Dell XPS 13 Yekuvandudza Dhizaina neUbuntu nekutadza
Android 8.0 Oreo inokonzeresa patsva pa Samsung Galaxy S8 uye S8 Plus
Samsung yakazivisa chiitiko chisingadiwe icho chakaitika munzvimbo dzayo dzepayimari renji kana uchigadzirisa ku ...
Isa Linux pane yako Android neLinux Deploy
Mune ino kesi isu tinoshandisa chishandiso chakachengetwa mukati meGoogle repositori ino "Linux Deploy" Ini ndinosiya iyi link kuti iwe ugone kuiisa pano, zvakakosha kwandiri kuti nditaure kuti zvakafanira kuve nemidzi rombo.
Haven: shandura yako yekare smartphone kuti ive mudziyo wekutarisa
Haven, sezvaunotoziva kare, ndicho chikumbiro chakakurumbira chakapihwa naEduard Snowden uye chakagadzirwa naGuardian ...
Isa LINSET paKali Linux
Linset ine chidimbu chayo muChirungu Linset Haisi Yemagariro Enginering Chishandiso chishandiso chakagadzirwa munzvimbo yeLinux inotibvumidza kuongorora network.
Vamwe vakwikwidzi kuchengetedza Linux iri mupenyu mune nharembozha
Isu tato taura kuLxA nezve akasiyana Linux mafoni mapurojekiti. Zvakawanda uye zvakawanda mapurojekiti matsva anowedzerwa ku ...
Musiyano uripo pakati peLinux neUnix
Ndeupi mutsauko uripakati pe Unix neLinux? Isu tinokutsanangurira iwe kuti iwe ugadzirise iyo nyonganiso uye usazo vavhiringidza ivo zvakare
Debunking dzimwe ngano nezveLinux uye yemahara software
Ini ndanga ndambotaura chinguva chakapfuura kuti Jamie Hyneman ane mukurumbira kubva kuMyth Busters anoshandisa Linux uye yemahara software, uye ...
Ubuntu Runhare runomiswa muna Chikumi. Nekudaro, mafoni anoenderera mberi aine Linux nekutenda kune iyo KDE Plasma Mobile chirongwa
Erle Robotic inotipa fungidziro yeramangwana remarobhoti
Isu takatonyora akati wandei zvinyorwa pamusoro pekutanga kweSpanish Erle Robotic, iyo kunyangwe hazvo hudiki hwayo yakatopa ...
Iyo BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition piritsi rave kuwanikwa
Mazuva mashoma apfuura takazivisa kuti iyo BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition piritsi yaiwanika isati yatengeswa. Zvakanaka, zvatove zviripo nhasi ...
Iwe unogona zvakare kuunza mashiripiti eKisimusi kune yako Linux koni kune aya akakosha misi. Ichi chishongo chakareruka chePerl chegobolondo.
Linux inoyamwa ... Spanish-dhizaini
Kutsoropodza Linux hakusi kurwisa iyo, asi kuivandudza. Pamwe isu tinofanirwa kuratidza uye kusave Linux Taliban, asi tibatsire kufambira mberi uye kusimudzira.
Ndiani anoshandisa GNU / Linux? Vanhu vakakurumbira, masangano, makambani, hackers, ...
Parizvino Linux haina kunyanya kupararira mumakomputa epamba, zvisinei mune mamwe mativi inokanganisa. Kuti uwane kuti ndiani anoshandisa Linux isu tinokuratidza
Vhiniga 3.9.5 inoshandisa API nyowani
Vinagre 3.9.5 ndiyo nyowani yekure kure yekuwana mutengi yekugadzirisa iyo inoshandiswa zviri pamutemo muGNOME. Pakati pekuvandudza pane iyo API, kugadzirisa bug
The 7 Best Linux Distros muna 2012
Linux.com chinyorwa chine 7 yakanakisa kugoverwa kweLinux mugore rino 2012 zvichibva pane zvakaitika uye nemaonero emunyori.
Ipfupi nhoroondo yeLinux. Pfupiso yekuti Linus Torvalds akagadzira sei Linux sisitimu inoshanda. Ndezvipi zvaive zvinokurudzira zvako uye wakakwanisa sei kuzviumba?
Takasvika kumagumo echikamu pane zvinyorwa zveGrub, zviri pachena kuti kune zvimwe zvakawanda asi isu tangomira kuti titsanangure zvakakosha nezve Grub kutanga uye izvo zvinowanzo pindirana nezvinenge matambudziko ese anonzi ehuori.
GRUB ine yayo notation, iyo yakafanana chaizvo, kunyangwe yakati siyanei neyakajairika notation iyo ingangoitika yeLinux mushandisi anogona kuunza.
GRUB ndechimwe chezvinhu zvakakosha zveLinux, asi inogona zvakare kuve yeinonyanya kunetsa. Muchikamu chino tinotsanangura kuti chii uye kuti chinoshanda sei kubva pane yakapusa maonero.
Linux vs Windows. Misiyano yekutanga
Misiyano yepakati pakati peWindows neLinux. Maitiro ese ari maviri ekushandisa ane zvazvakanakira nekuipira. Muchikamu chino tinozviongorora kuitira kuti iwe utange kugadzira maonero ako.
Izvo zvakanakira Linux pane nhare
Ini ndinofunga isu tese pano tinoziva mabhenefiti ayo Linux inogadzira kune yedu komputa, ingave desktop kana laptop, izvozvi ...
Linuxeros inogara munguva yakapfuura
Ndanga ndiri gnulinux mushandisi kwemakore gumi. Ndiyo OS yandinoshandisa izvozvi. Asi pane chimwe chinhu chandisati ndanzwisisa: ...
Chii icho uye nei ndichida BACKPORT
Ndeapi backports uye anoshandiswa chii muGNU / Linux? Tsananguro yakapusa nezve kubatsira kwayo.
Nepomuk, iyo KDE semantic desktop
Tichishandisa metadata, yakavakirwa-mukati Linux Kernel neKDE mabasa, tinogona kusimudzira desktop yedu kuti iite semantic neNepomuk
Musiyano usingakundike pakati pekushandisa graphical uye koni
Izvi zvinoenda kure uye neimwe nzira kana imwe takambozvibata pamberi, asi ini ndinouya nazvo izvozvi ...
Kuedza Puppy Linux pane pendrive
Iri zano rakanaka kuva nehurongwa hunoshanda uye hwakasununguka kana zvikaitika kwauri ...
Raira mutsara zvirongwa zvese zvinhu muLinux
Basic console application kutenderera Linux. email, mimhanzi, MSN, gtalk, Twitter, browser, nezvimwe.
Unogovana sei mafaera muLinux?
Mubvunzo unonakidza, unobva pane zvakaitika kwandiri semushandisi weLinux. Iko kudiwa kwekugovana mafaera kuripo ...
Zvichida chimwe chinhu chakashamisika nevazhinji, kunyanya kana uchitanga muLinux haisi iyo chete manejimendi sisitimu ...
Zvakanaka, heino rondedzero, inowedzerwa, ine zvishoma-zvinozivikanwa kugoverwa. Nekuti, nekuda kwekunakirwa, mavara ... SliTaz GNU / Linux gurukota reFrance rinobata ...
GLIBC uye EGLIBC kana sei (zvakaipa) kubatana pamwe zvinokanganisa Mahara Software
Chii chaitika? Zvakanaka, dambudziko rinoita sehunyanzvi rinoshanduka kuita dambudziko rehunhu. Debian anochinja ...
Distros yezvimwe zviitiko zvaunofanira kuziva nezvazvo
MunaFebruary ini ndanga ndichinyunyuta nezve mazana emahara distros pamusika kubva pakuwedzeredza (ine akawanda distros ...
SliTaz vs. Puppy vs. DSL> Vakatenderedza Vashumiri
Uku kufananidza pakati pe "dandemutande" (SliTaz), "imbwanana" (Puppy) uye "dhiabhori mudiki" (DSL). Screenshots dzePuppy uye ...
Zvinhu zvekudzidza kubva kuLinux kutama
Microsoft inotenga, Chile inotengesa. Ndiwo waive musoro wenyaya, kumashure pakati pa2007 yemablog echibvumirano ...
Kuedza Tiny Core Linux
Ini ndaive nekunzwa kuti iyi Tiny Core Linux yaive chinhu chakanaka uye kwete, kwete nekuti inorema futi, ndinoreva, zvakare chimwe chinhu chakajeka, ...
Nouveau: Iyo nVidia driver (yemahara) inoshanda ne3D
Pane zvimwe chokwadi nezvegirafu muLinux: Izvo zvaunofanirwa kudzivirira makadhi eATI kana chipset (kunyangwe zvavo ...
Kuedza Elive Gem neE17
Yekutanga kuyedza paElive Gem neE17, yakanakisa asi inoshanda distro?
Vashandisi veLinux vanofanirwa kuchinja
Vhiki rino zvinhu zvakaitika kwatiri zvatisina kumboita nazvo, pamwe mune ramangwana tichaburitsa pachena zvese ...
Ndinoyeuka kuti nekukurumidza mushure mekuisa Debian Lenny, ini ndaida kuyedza iyo LXDE nharaunda yaive ichangobatanidzwa muDebian….
Linux maforamu uye kutya
Imwe yekutya kukuru kupinda muLinux kuziva maitiro ekubata neLinux maforamu, mazhinji acho ...
Nei paine mashoma mitambo yeLinux?
Kune mashoma mitambo yeLinux uye chimwe chezvikonzero chingave chekuti pane vashoma vangangoita vatengi, izvo zvinodzosera iyo vhidhiyo mutambo indasitiri kumashure kana zvasvika pakuburitsa kwayo Linux mitezo.
Sei Debian naUbuntu vachiwirirana zvakanyanya?
Kana tikataura nezvaDebian naUbuntu, zvinoita sekutaura nezvaamai nemwanasikana. Yayo Debian mavambo, a ...
Kubva Kubuntu kusvika kuDebian
Ini handizvione semunhu akapfuura kana wehunyanzvi mushandisi zvachose, ini handitombo shandisa PC kutarisa, kutaura, kugadzira zvinyorwa, teerera ...
Ko Open Source inobatsira here?
Richard Stallman anoti: Mahara Software haisi yemahara software (…) zvirokwazvo unogona kuita mari neSoftware…
Kutsvaga kwechokwadi kwemhinduro
Zvakajairika kuisa nyowani Distribution X uye tsvaga zvinyorwa zvacho, asi inogara iripo uye mune zvese ...
Zvakatora nguva yakareba kuti ndive neinternet kubatana mumba mangu uye kwemakore ini chete nzira ne ...
zvakakosha zveElive Gem, mugove unozivikanwa nehukama hwayo hwakanaka uchishandisa Enlightenment
Vashandisi veGNU / Linux: Mutemo Wakagadzirwa, Cheat Yakagadzirwa!
Mhando dzinogona kuitika dzeakaundi muLinux, zviyero zvavo uye zvakanakira.
YaST, shamwari yakanaka mu OpenSUSE
YaST chishandiso chekutungamira muO OpenSUSE iyo inofambisa manejimendi yesystem yedu
Yakapetwa zviyero mubato re linuxist
Chaizvoizvo, kana ndikati ini ndinoona kuti socialism neLinuxism zvine zvakafanana ndinoreva izvo, asi kwete, ...
NdiPeritas nemaApple ...
Basics usati waisa Linux paWindows pc, maitiro ekuzvidzivirira uye kupatsanura hard drive
Vhura sosi uye yemahara software haina kufanana, asi zvine basa here?
Sezvo Linux yakazvarwa sekernel, pakave nekukakavadzana, zvinonzi Linus Torvalds anga asina chokwadi chekupa kernel yake, ...
Zvimwe pane iyo Linux koni: isa ruoko rwako mukati
yekutanga yekutanga mirairo mu linux koni, kuyedza Linux kubva liveCD
Iyo Linux Console - Nhema Screen YeRufu?
Iwe wakakwanisa kushandisa inoshamisa Live CD, ona akanakisa magiraidhi munyika yeanoshanda masystem neCompiz Fusion, iwe ...
A Live CD kana Live DVD, zvinowanzoitika Live Distro isisitimu yekushandisa inochengetwa pane inobviswa midhiya inogona kumhanyiswa kubva pairi pasina kuimisa pane yakaoma dhiraivhu.
Iwe unoziva, Linux haina kufanana neWindows, pakati pezvimwe zvinhu nekuti Linux ine zvakawanda zvakasiyana siyana. Asi chinhu chimwe…
Compiz Fusion ndiko kusanganiswa pakati pemapurojekiti maviri esoftware: Compiz neBeryl. Compiz mupepeti windo. Beryl 'yakakosha' forogo yeiyo yekutanga Compiz chirongwa.
Usafunge kuti ndawana Linux, Linux yakandiwana. Ini handina kuwana yangu yekutanga ruzivo neLinux ...
Kutsigira Linux… paWindows!
Maitiro ekugadzira muchina chaiwo paWindows uchishandisa VMware kutevedzera Linux
Chimwe chezvinhu izvo dzimwe nguva ndinochiva mushandisi akajairika uyo anoshandisa Windows XP, ndozvishoma sei ...
3D, mifananidzo, Linux uye Windows
Sekureva kweThe Inquirer: "Muindasitiri yemafirimu Linux yakahwina, ichishandiswa mune ese maseva nematafura akapihwa ku…
Zvinorevei izvo "Distro" zvinoreva?
Chinhu chekuti pandakasvika kune iyo Linux nharaunda zvakandiomera kuti ndipinde mumusoro mangu izvi: Wese muLinux ...
Kuedza Linux: PendriveLinux
Isu tinoramba tichiongorora dzimwe nzira dzekuyedza Linux uye kwete kufa kuyedza, tiri kuenda neimwe nzira isingazosiya ...